४० करोड जोगाउन प्रचण्डपुत्र प्रकाश भारतमा - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
४० करोड जोगाउन प्रचण्डपुत्र प्रकाश भारतमा
सगरमाथा आरोहणसँगै झाँगिएको प्रकाश–विनाको प्रेम प्रसंगको कुरा साप्ताहिक जनआस्थाले छताछुल्ल बनाएको थियो । साप्ताहिक जनआस्थामा समाचार आएदेखि नै अत्यन्तै तनावमा आएका प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले आफ्ना बाबु प्रचण्ड र आमा सीता, दिदी रेणुकाबाट अवैध रुपमा जम्मा पारेको ४० करोड भन्दा बढी रकम र विना मगरलाई साथै लिएर भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको समाचार मोहन वैद्य निकट दैनिक पत्रिका जनदिशाले ६ दिन अघि खुलासा गरेको छ । जनदिशाले प्रकाशन गरेको समाचारमा कति तुक छ ? कति सत्यताको नजिक छ, त्यो बारेमा भोलिका दिनमा सबै रहस्यहरु सार्वजनिक होलान् तर प्रचण्डमाथि यस्तो आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । किनभने प्रचण्ड जनसेनाका सुप्रिम कमाण्डर हुन् । उनकै नेतृत्वमा जनमुक्ति सेनाका नाममा राज्यबाट पाएको रकम जम्मा पारिएको छ । साना लडाकुको चेक खोस्नेदेखि नक्कली तीन हजार लडाकूको नाममा राज्यबाट लिएको त्यत्रो रकम कसले गुट्मुट्यायो ? यो सबै काम प्रचण्ड सुप्रिम भएका नाताले उनकै छोरा प्रकाश दाहालले गरेका हुन् । अहिले त्यही रकम तह लगाउन विना मगरलाई सहारा लिएर प्रचण्ड पुत्र भारत गएका हुन् ।
हाम्रो विश्वस्त सूत्रका अनुसार अहिले उनले देहरादुनबाट आफ्नो भारतीय पान नम्बर र रासन कार्ड लिएका छन् । उनी अहिले व्यापार व्यवसाय गर्न योजना बुन्दैछन् । ६ दिन अघि उनले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट खोलेर आफूमाथि लागेका आरोपलाई खण्डन गरेका थिए ।
अहिले गाईजात्रा सप्ताह नसकिएको बेला एमाओवादीले कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेझैं सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेको छ । यसैबीच नेताहरुविरुद्ध सम्पत्ति एवम् आर्थिक स्थितिको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा ६५ वटा उजुरी परेको छ । साउन ११ गतेदेखि आह्वान गरी साउन २८ गतेसम्म दुई–दुई पटक थपिएको म्यादमा लिखित, मौखिक र ईमेलबाट गरी ६५ वटा उजुरी परेको आयोगका अध्यक्ष अमिक शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।
सबैभन्दा बढी उजुरी प्रचण्ड माथि नै परेका छन् । सम्पत्ति छानविनकै विषयलाई लिएर उद्घाटन भएको एनेकपा माओवादीको सातौं विस्तारित बैठक सर्वदा रुपमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन । सम्पत्तिका बारेमा निकै बबाल मच्चिएको एमाओवादीको ४० करोड अवैध रकम साँच्चिकै प्रचण्डपुत्र प्रकाशले कुम्लाएर भागेको हो भने त्यो बारेमा राज्यबाटै छानविन हुनुपर्ने माग सबैको छ ।